Ambongadiny FEELM Nandresy iF Design Award 2020 marika teknolojia fanaovan-tsolika vaovao. orinasa sy mpanamboatra | SMOORE
FEELM Nahazo iF Design Award 2020 marika teknolojia fanaovan-tsolika vaovao.
Miaraka amin'ny olan'ny tontolo iainana amin'ny sigara e-sigara mahazo ahiahy bebe kokoa, vaovao tsara fa misy ny mpamokatra sasany mandray am-pahamatorana izany amin'ny asany. Ny Disposable Paper E-sigara, mpandresy tamin'ny mari-pankasitrahana 2020 iF, dia sanganasan'ny FEELM, marika teknolojia fanavaozana atomika vaovao.
Ny vokatra FEELM dia misy taratasy eco-friendly vaovao, izay manatsara ny fahasimbana amin'ny taha 76% amin'ny habetsany raha oharina amin'ny plastika mahazatra. Ary koa, ny famolavolana taratasy maro sosona dia miavaka amin'ny fahadiovana sy ny asa sosialy. Ny triatra ivelany ampiasaina amin'ny vavam-bava dia azo esorina alohan'ny hampitana azy amin'ireo mpampiasa 15 manaraka. Miaro ny fahasalamanao manokana io famolavolana io ary manaparitaka ny fiheverana ny fiarovana ny tontolo iainana raha mifanerasera amin'ireo mpifoka olon-dehibe.
Ny iF DESIGN AWARD dia fifaninanana famolavolana fanta-daza manerantany amin'ny vokatra, fonosana, maritrano, famolavolana serivisy sns. Nahazo voalohany tamin'ny 1953, izanyno tombo-kase famoronana tsy miankina tranainy indrindra eto an-tany,mariky ny zava-bitan'ny famolavolana miavaka izay mifantoka amin'ny herin'ny famolavolana vaovao.
FEELM dia manome teknolojia manafana fanavaozana sy manokana ho an'ny rafitra pod mihidy. Ny NJOY, RELX, HEXA, Haka, VAPO, Alfapod, ary marika maro hafa dia feno haitao FEELM. Ny haben'ny varotra pods misy FEELM ao anatiny dia nihoatra ny 1 miliara.
Mitovy amin'ny Vaporesso sy CCELL, FEELMis dia fizarana asa mahaleo tena an'ny Shenzhen SMOORETechnology Limited., Izay orinasa mitarika eo amin'ny sehatry ny vaping. Misy manam-pahaizana 400 mahery ao amin'ny SMOORE Research Institute, manana patanty 1600 manerantany.
Sigara hafanana, E sigara etona ranoka, Newport E sigara, Epen, Solony mifoka, E Kitapo Blitter sigara,